Ku guuleysiga tacliinta ee MHS | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Dibloomada 'Minnetonka' waa astaan muujinaysa hanashada tacliimeed iyo shaqsiyeed ee nidaamka ugu sarreeya.
-Guddiga Gudiga Dugsiga Minnetonka
Qalinjabiyeyaasheena waa ka-faa'iideystayaasha sannadaha heer sare ee barista, fursado badan oo lagu fiicnaado, kumanaan doolar oo maalgashi bulshada ah, iyo heerar sare oo sharaf bulsheed iyo taageero. Heerarka qalin-jabinta, dhibcaha ACT iyo albaabada kulleejooyinka fursadda waxay bixiyaan caddeyn lagu cabirayo nidaamkayaga dugsiga ee aadka u guuleysta, laga soo bilaabo carruurnimada hore ilaa fasalka 12aad.
15-kii sano ee la soo dhaafay, iyada oo diirada la saaray oo si ula kac ah loo hagaajiyay barnaamijkeena tacliimeed, ardayda Minnetonka waxay ku fiicnaadeen, taasoo horseed u ah heerarka sare ee ugu sarreeya ee heer kasta oo heer fasal ah. Xaqiiqdii, Fasalka 2015 wuxuu dhajiyay celceliska celceliska ugu sarreeya ee ACT ee 26.9, laakiin ardaydayada dugsiga hoose ee hadda waxay ku socdaan xawaare ay ku sii fiicnaanayaan.
Imtixaanka gelitaanka kuleejka ee 'ACT' waa cabir muhiim u ah guusha maxaa yeelay wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa mustaqbalka ardayga. Iyadoo la adeegsanayo ACT sare, ardaydu waxay hagaajinayaan siciradooda gelitaanka kulleejooyinka ay doorteen waxaana laga yaabaa inay helaan deeqo waxbarasho oo dheeri ah iyo gargaar lacageed; waxay kaloo albaabada u furi kartaa fursado badan. Daraasaduhu waxay muujiyeen inay jirto faa'iido dhaqaale oo aad u badan oo waqti dheer ka sarraysa ACT, laakiin waxaa taas ka sii muhiimsan, ardaydu ma gaadhayaan buundada sare ee 'ACT' haddii aysan u soo bandhigin manhaj adag oo dugsiga sare ah oo leh rajooyin sare oo xagga waxbarashada ah. Marka, maaddaama buundada ACT ee degmada ay kor u kacday sannadihii la soo dhaafay, waa natiijada manhaj aad u dhib badan oo ka jira Dugsiga Sare ee Minnetonka oo leh fursado badan oo ardayda oo dhan ah.
Waxaa ka mid ah fursadaha kordhiya fursada ardaygu ku guuleysto waxaa ka mid ah barnaamijyada 'Advanced Placement' iyo barnaamijyada 'International Baccalaureate', oo u oggolaanaya ardayda inay iskood uga hor yimaadaan shaqooyinka koorsada heer kulleejo ah iyagoo weli ku jira dugsiga sare. Cilmi-baaristu way cadahay: Ardayda qaata koorsooyinka AP ama IB inta ay ku jiraan dugsiga sare waxay u badan tahay inay dhammaystiraan shahaadadooda jaamacadeed – xitaa haddii ay tahay hal koorso oo keliya. Ka mid ah Fasalka MHS ee 2015, 70% ayaa lagu qoray ugu yaraan hal koorso AP ama IB ah intii lagu jiray sanad dugsiyeedkoodii weynaa. Kaqaybqaadashada koorsooyinka AP iyo IB ayaa si aad ah u kordhay sanadihii ugu dambeeyay, maaddaama dugsiyadeenna hoose iyo kuwa dhexe ay sifiican ardayda ugu diyaarinayaan inay gaaraan heer sare ee dugsiga sare.
Sidee celceliska ardaygu wax uga qabtaa Minnetonka?
Macallimiin gaar ah, manhaj cilmi-baaris ku saleysan, waalid adag iyo taageero bulshada, iyo rajooyin sare oo laga qabo guusha ardayga, celcelis ahaan ardayda Minnetonka ayaa ku fiicnaaday. Dhamaadka dugsiga hoose, celceliska fasalka 5aad wuxuu sameynayaa wax ka badan heerka fasalka 11aad ee akhriska iyo xisaabta marka loo eego xeerarka qaranka. Dugsiga dhexe, celceliska ardaygu wuxuu ka sarreeyaa boqolkiiba 80 boqolkiiba qaran ahaan xagga akhriska iyo xisaabta. Dugsiga sare, celceliska ardaygu wuxuu iska diiwaangeliyaa koorsooyinka AP ama IB mar uun inta lagu gudajiro afartooda sano, iyo 84% dhamaan imtixaanada MHS AP waxay kasbadaan seddex ama wax kabadan. Celceliska ardayda dhigata Dugsiga Sare ee Minnetonka ayaa sanadkii hore ka qalin jabiyay 26.9 ACT iyo 3.3 GPA.
Heerka sare ee ku-guuleysiga tacliimeed ee Minnetonka wuxuu ku bilaabmayaa aasaas adag oo xagga akhriska iyo xisaabta heer dugsi hoose ah. Markay ardaydu galaan dugsiyadeenna xanaanada, badankood waxay la siman yihiin asxaabtooda qaran. Si kastaba ha noqotee, inta lagu jiro sanad-dugsiyeedkooda dugsiga hoose, koritaan la yaab leh ayaa dhaca. Ardayda badankood waxay kasbadaan in kabadan halsano kobaca tacliimeed sanad gudihiis. Dhamaadka fasalka 1aad, celceliska ardaygu wuxuu u dhexeeyaa heerka fasalka 2aad iyo 3aad ee akhriska iyo xisaabta. Kordhin kale oo sanad iyo bar ah oo ku jirta fasalka 3aad, ardayda badankood waxay gaarayaan heerka fasalka 5aad ee xisaabta iyo akhriska. Tacliin muhiim ah "kobaca kobaca" waxay dhacdaa labada fasal ee 4aad iyo 5aad, markay ardaydu dardargeliyaan saddex sano sanad dugsiyeed kasta. Marka, dhamaadka dugsiga hoose, celceliska fasalka 5-aad ee Minnetonka wuxuu gaarayaa heerka fasalka 11-aad ee akhriska iyo xisaabta marka loo eego xeerarka qaranka ee NWEA.
Heerka sare ee noocan oo kale ah had iyo jeer caadiyan kama aheyn Minnetonka. Markii Fasalka 2015 uu ahaa fasalka 5-aad, celceliska ardaygu wuxuu sameynayay bilowga fasalka 8-aad marka loo eego xeerarka qaranka. Hase yeeshee, Fasalka 2015 wuxuu soo dhejiyay celceliska ugu sarreeya ee dugsiga ee 26.9. Marka way fududahay in la fahmo sababta aan u nidhaahno, "kan ugu fiican ayaa weli soo socda."